ခွေးဆိုရင် ဟောင်တတ်တယ်လို့ပဲ လူသိများပေမယ့် လုံးဝ မဟောင်တတ် တဲ့ ခွေးမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အာဖရိက အလယ်ပိုင်းမှာ ပေါက်ဖွားတဲ့ အမဲ လိုက်ခွေး Basenji ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်သံအစား အခြား တိုးတိုးလျလျ အသံသာထွက်ပါတယ်။ ကွန်ဂို နိုင်ငံ မှာ ပိုအတွေ့များ ပါတယ်။ အမဲလိုက်ခွေး ဆိုပေမယ့် အိမ်မွေးခွေးအဖြစ် အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်တို့လို နိုင်ငံက ဈေးကြီးပေး မွေးပါတယ်။ အနံ့ခံ လည်း ကောင်းတဲ့အတွက် ထော... က်လှမ်းရေးတွေမှာလည်း အသုံးပြု တတ် ပါတယ်။
အရောင်ကတော့ ပုံမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ အရောင်အပြင် အနက်ရောင်ကွက်ကြား နဲ့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မဟောင်တတ်တဲ့ ခွေးမို့လို့ Basenji ကို လူသိများပါတယ်။
http://www.innewsmyanmar.com မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
Posted by 925 at 07:330comments
အရက်သမားတွေ ဘာလို့ အသက်ရှည်ရလဲ ဆိုတာ ဒီပုံတွေကို ကြည့်ရင် သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အသက်ရှည်ချင်လို့ဆိုပြီး သွားမစမ်းရဘူးနော် :D
မည်သူ့ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ :P
Posted by 925 at 06:290comments
(1) သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ တချို့အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ မရှိတော့ ပေမယ့် ဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ အစာအိမ် ၊ သရက်ရွက် အသည်းရဲ့ ၇၅ရာခိုင်နှုန်း၊ အူလမ်းကြောင်းရဲ့ ၈၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျောက်ကပ် တစ်ခြမ်း၊ အဆုတ်တစ်ခြမ်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက တချို့ အစိတ် အပိုင်းတွေ မရှိရင်တောင်.. လူကောင်း တစ်ယောက်လို မဟုတ်ပေမယ့် ဆက်ပြီး အ...သက်ရှင် နေနိုင်ပါသေးတယ် ။
(2) လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအသန်မာဆုံးကြွက်သားက လျှာဖြစ်ပြီး အမာကျောဆုံး အရိုးကတော့ မေးရိုးပါ
လေးပုံတစ်ပုံမျှရှိပြီး အရိုးပေါင်း ၅၂ ချောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
(4) ခြေဖ၀ါးမှာ ချွေးဂလင်းပေါင်း 500,000 ခန့်ရှိပြီးအဲဒီချွေးဂလင်းတွေ
က တစ်နေ့ကိုချွေး (1)ပိုင့် မကထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ကိုတောင် ချေဖျက်နိုင်တဲ့အထိ ပြင်းအားရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအက်ဆစ်ရည်ဟာ အစာအိမ်ကိုတော့ဘာကြောင့်မထိခိုက်စေလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းက - အစာအိမ်နံရံဟာသုံးရက် ဒါမှမဟုတ် လေးရက်တစ်ကြိမ်လောက်ဆဲလ်အ သစ်တွေနဲ့ အလိုလိုအစားထိုးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(6) နှာချေလိုက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့အမှုန်အစက်တွေဟာ တစ်နာရီကို
100 mph နှုန်းအထိရှိပြီး ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ 60 mph နှုန်း အထိလျှင်မြန်ပါတယ်။
(9) ထပ်တူညီအမွှာတွေကလွဲလို့ လူတိုင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီတဲ့ ကိုယ်နံ့တွေရှိကြပါတယ်။
(10) ကလေးငယ်ဘ၀မှာ ဦးခေါင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံ အချိုးအ စားနဲ့ညီမျှပြီး အသက် (၂၅) နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ရှစ်ပုံ တစ်ပုံမျှပဲ ရှိပါတော့တယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်မှာ ဦးခေါင်းရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးထွားနှုန်းထက် နှေးကွေးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(12) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလိပြန်ထိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး..တဲ့ ။။ ဘာကြောင့်လဲဆို ...ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကလိထိုးဖို့ကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထိုးမယ့်နေရာရယ် ၊ ထိုးမယ့်အချိန်ရယ်ကို အတိအကျသိနေတဲ့အတွက် မယားပဲနေနိုင်တာပါ ....တဲ့။
(13) သင့်နှာခေါင်းဟာ အနံ့ပေါင်း (၅၀,၀၀၀)ကိုမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့သင်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘ၀တစ်လျှောက်
လုံး အမျိုးသားတွေထက် အနံ့ခံအာရုံပိုကောင်းဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။
(15) ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေများသောအားဖြင့် ပထမသုံးလ ပတ်အတွင်းမှ (၁) ဖား (၂) တီကောင်နဲ့ (၃)အပင်စိုက်ထားတဲ့အိုး စတဲ့ အိပ်မက်(၃)မျိုးကို မက်လေ့ရှိပါတယ် ။ ဘာကြောင့်ရယ်လို့ အတိအကျ အတည်မပြုနိုင်သေးပေမယ့် ... သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စဉ်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေရဲ့အချိုးအစားမမျှတ
(17) လူ့ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်ဟာ စွယ်စုံကျမ်းငါးအုပ်စာမျှ အချက်အ လက်တွေကို သိုမှီးထားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့(၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဟာ ရေဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး သွေးထဲမှာ ပျော်ဝင်လာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်
ရဲ့(၂၀)ရာခိုင် နှုန်းကို အသုံးပြုပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရတဲ့ နာကျင်မှု မှန်သမျှကို ဦးနှောက်သိရှိခံစားနိုင်ပေမယ့် ... သူ့ကိုထိခိုက်မိမယ်ဆိုရင်တော့ နာကျင်မှုကိုမခံစားမသိရှိနိုင်ပါဘူး ..... တဲ့။
တန့်သွားပြီး နှာခေါင်းနဲ့နားရွက်ကတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လိုက်ပါကြီးထွားလာလေ့ရှိပါတယ်။
(21) ကျနော်တို့တွေဟာ ညနေပိုင်းထက် မနက်ပိုင်းမှာ(၁)စင်တီမီ တာလောက် အရပ်ပိုရှည်နေလေ့ရှိပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အရိုးအဆစ်တွေဟာ နေ့ခင်းပိုင်းမှာပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေပေမယ့် ဒူးအတွင်းမှာရှိတဲ့အရိုးနုနဲ့တချို့အရိုးတွေဟာ တစ်နေ့ခင်းလုံး ဖြေးဖြေး ချင်းဖိနှိပ်ခံထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့် ညနေပိုင်းမှာအနည်းငယ် ကျုံ့ဝင်သွားတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ညပိုင်းအိပ်စက်အနားယူလိုက်တဲ့အခါ ဒူးဆစ်အရိုးနု နဲ့တခြားအရိုးတွေ ပြန်ဆန့်ထွက်လာပြီး ပုံမှန်ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
(23) လက်ခလည်မှာရှိတဲ့ လက်သည်းခွံဟာ ရှည်လျားမှုနှုန်းအမြန်ဆုံး
(24) မျက်နှာပြင်တ၀ိုက်ပေါက်တဲ့ အမွေးအမျှင်တွေဟာ ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းမှာပေါက်တဲ့အမွှေးအမျှင်ထက်ရှည်လျားမှု နှုန်းမြန်ဆန်ပါတယ် ဒီအချက်ဟာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးမှာပါ တူညီတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် ။
(30) မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မီလျံသန်းတစ်ရာမျှသော ဆဲလ်တွေဟာ သေဆုံးနေကြပါတယ်။
(33) လူတစ်ယောက်ဟာ မအိပ်ပဲနေတာထက်အစာအစားမပဲ ပိုပြီးကြာ
ကြာ အသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။ ရေတစ်မျိုးပဲသောက်ရမယ်ဆိုဦးတော့ ...ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ တခြားအချက်အလက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး သာမန်လူတစ်ယောက်ဟာ အစာမစားပဲတစ်လနှစ်လလောက် အသက် ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရက်အနည်းငယ် အိပ်ရေးပျက်လိုက်ခံရုံနဲ့ အဲဒီလူရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ သိသိသာ သာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ် ချက် မှတ်တန်းများအရ အကြာဆုံးမအိပ်စက်ပဲ နေထိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကတော့ (၁၁)ရက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အပြီးမှာတော့ အစမ်းသပ်ခံလူသားဟာ စကားထစ်ခြင်း ၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြာခန ဘာလုပ်နေမှန်း မေ့လျော့ခြင်းတွေကို ခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
(35) ကမ္ဘာပေါ်မှာအတွေ့ရအများဆုံးသွေးအမျိုးအစားက (O) အိုသွေးဖြစ် ပြီး အရှားပါးဆုံးသွေးအမျိုးအစားကတော့(A-H) ခေါ် ဘုံဘေသွေး အမျိုး အစားဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး စတင်တွေ့ရှိခဲ့ချိန်ကနေ ယခုအချိန်ထိရှာတွေ့ခဲ့သမျှ လူဦးရေဟာ ရာဂဏန်းမျှသာရှိသေးပါတယ် ။
(36) ညာသန်တွေဟာ ဘယ်သန်တွေထက်ပျမ်းမျှ သက်တန်း(၉)နှစ်ခန့် ပိုမိုရှည်လျားလေ့ရှိကြပါတယ် ။ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စက် ပစ္စည်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် ညာသန်တွေအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အတွက် ၊ ဘယ်သန်တွေအသုံးပြုတဲ့အခါ မတော်တ ဆထိခိုက်ဒဏ်ရာခြင်း ၊ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ စာရင်း များအရ မတော်တဆထိခိုက်မှုပေါင်းများစွာဟာ ဘယ်သန်တွေေ ကြာင့်ဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘယ်သန်တွေအသက်ဆုံးရှုံး နေလေ့ရှိပါတယ်..တဲ့ ။
(39) လူ့နှလုံးသာ ပေသုံးဆယ်အမြင့်ထိရောက်အောင် သွေးတွေကိုပန်း ထုတ်နိုင်လောက်တဲ့ ညှစ်အားရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအချက် ... မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ ... ။
(40) ပြုံးဖို့အတွက်မျက်နှာကြွက်သား(၁၇)ခုအသုံးပြုရပြီး မျက်မှောင်ကြုတ် ဖို့အတွက် (၄၃)ခုအသုံးပြုရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ .... လက်တစ်ဖက်လုံးကို မ ပြီးအားနဲ့လွှဲရိုက်လိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကြွက်သား(၄)ခုပဲသုံးစရာလိုပါတယ်
ရအောင်အကြံဥာဏ်တစ်ခုလောက်ပေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များပေါ့ ... ကိုယ်လုံးဝမနှစ်သက်တဲ့ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုသိပ် အနှောင့်အယှက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် အားနာပါနာနဲ့လည်းပြန်ပြုံးပြမနေပါနဲ့။ မကြိုက်မနှစ်သက်ကြောင်းလည်း အမူအရာနဲ့မျက်မှောင်ကြုတ် ပြမနေ
ပါနဲ့ ...။ အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ ... ကြွက်သားလေးခုကိုအသုံးပြုပြီး ..အားရပါးရသာ ... Slap လိုက်ပါ...လို့ ...
(တကယ်တော့ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်
ရာအကုန်လုံးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ နေ့စဉ်လိုလိုပဲ.. အသစ်အသစ်သော
အံ့သြဖွယ် အချက်အလက်တွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ယနေ့တိုင်ရှာတွေ့နေ
ဆဲပါ။ ဒီပိုစ့်နဲ့ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ကိုတော့ OddStuff Magazine ပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ Share လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း)
Myanmar Online News တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Photo From :Myanmar Online News
Posted by 925 at 09:060comments
Stone Man Syndrome လို့လည်း လူသိများတဲ့ Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) ဟာ တကယ်ပဲ ကျောက်တုံး ဖြစ်စေ တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်တုံးရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးက အသား၊ ကြွက်သား၊ တစ်ရှုးအားလုံးကို အရိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သွားစေတဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ရောဂါ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လူ ၂ သန်းမှာ ၁ ယောက် ဖြစ်တတ် တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ချိန်အထိ စစ်တမ်းအရ FOP ဝေဒနာသည် ၂၅၀၀ ကျော်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ သူ့ကို ကင်ဆာရောဂါ တစ်မျိုးတည်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ရောဂါမို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် လူသိများသွားသူကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Philadelphia မြို့ က Harry Raymond Eastlack, Jr. (1933 – 1973) ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်တုန်းက ဆော့ကစား ရင်း ခြေထောက်မှာ အရိုးဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း အရိုးဒဏ်ရာကနေ အရိုး ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဖိုက်ဘာ တစ်ရှုးများ တဖြည်းဖြည်း ဆပွား တိုးလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို အရိုး အဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ချင်း ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အသက် ၄၀ ပြည့်ဖို့ ရက်ပိုင်း အလိုမှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ခါနီး ကာလမှာဆိုရင် နှုတ်ခမ်းက လွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဘယ် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းမှ လှုပ်ရှားလို့ မရတော့ပါဘူး။ Harry ကိုအခြေခံလို့ Tell-Tale အမည်ရ ရုပ်ရှင်ကိုလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရိုက်ကူး ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသား Josh Lucas က သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
FOB အတွက် ယနေ့အထိလည်း ဆေးမတွေ့ သေးပါဘူး။ Harry ကတော့ သူ့အလောင်းကို Philadelphia ပြတိုက်ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့တိုင် လည်း ရောဂါအတွက် အဖြေရှာဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက ငါးမန်းမှာ ရှိတဲ့ ဓတ်တစ်မျိုးက ပျောက်စေမယ်လို့ တွေ့ရှိပြီး ဆန်းသပ်ရာ ဘာမှ မထူးခြားခဲ့ပါဘူး။
FOP က မွေးရာပါလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်မှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏာကတော့ ခြေမ အရွယ်အစားက သာမန်ထက် ပိုမိုကြီးထွားလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး အရိုးဖြစ်သွားပုံကတော့ လည်ပင်းက စပါတယ်။ လည်ပင်မှ ပုခုံး၊ ပုခုံးမှ လက်မောင်း၊ လက်မောင်းမှ ဗိုက်၊ ဗိုက်မှ ခြေထောက် အထိ နေက်ဆုံး အပေါ်ကနေ အောက်အထိ တဖြည်းဖြည်း ကူးစက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းပါပါဝင်ပြီး နှုတ်ခမ်းသာ လှုပ်ရှားလို့ ရတဲ့အထိလည်း အခြေအနေ ဆိုးပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတစ်ကိုယ်လုံးကို အရိုးစု အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေတဲ့ FOP (ကျောက်တုံး ရောဂါ) ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Ref :rare medic facts.
Posted by 925 at 10:052comments
ဖတ်ရတန်ပါတယ်...) စီးပွားရေးသမားတွေ ဖတ်သင့်တယ် =D
ကျွန်တော်ဟာ ၀ယ်ပြီးခါစ Levi's ကိုဆွဲပြီး Shopping Mall ထဲကထွက်လာတယ်..။ အပေါက်ဝမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စောင့်နေတုန်း professional သူတောင်းစားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို တွေ့သွားတယ်.။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ လာရပ်တယ်..။ သူအဲလို ရပ်လိုက်တာ နောက်ဆက်တွဲ ရမယ့် သင်ခန်းစာ ပုံပြင်ရဲ့ အစဖြစ်လာတယ်.။
"ညီလေးရယ်.....သနားပါကွယ်..။ နည်းနည်းလောက် သနားခဲ့ပါ" ကျွန်တော်လည်း ပျင်းပျင်းနဲ့ အိပ်ကပ်ထဲက အကြွေစေ့တစ်စေ့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်.။ ပြီးတော့ သူနဲ့ စကားပြောဖြစ်သွားတယ်.။အဲဒီသူတောင်းစားက အရမ်းစကားပြောလို့ကောင်းတယ်.။ ".........ကျွန်တော်က ဒီဘက်တစ်ကြောမှာပဲ တောင်းဖြစ်တယ်.။ သိလား။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် အစောတည်းက တွေ့တယ်။ ဒီShopping Mall မှာ Levi's ၀ယ်တည်းက ပိုက်ဆံမနှမျောဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်..............."
ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားပြီး ပြောပိတယ်..."ခင်ဗျား နားလည်တာ များသားပဲ.."
"သူတောင်းစား လုပ်တယ်ဆိုတာလဲ၊ သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ရတယ်ဗျ"လို့သူကပြောတယ်..။
ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်...။ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး သူ့ကို "ဘယ်လို သိပ္ပံနည်းကျလဲဗျ၊ လုပ်စမ်းပါဦး"လို့ မေးလိုက်တယ်..။
သူက "ကျွန်တော့်မှာ တစ်ခြား သူတောင်းစားနဲ့ မတူတဲ့အချက် ဘာတွေရှိလဲ ခင်ဗျား အရင် ကြည့်ပါဦး" လို့ပြန်ပြောတယ်.။
သူကကျွန်တော့်အတွေးတွေကို စကားသံနဲ့ ဖြတ်လိုက်တယ်..။ "လူတွေက သူတောင်းစားဆို ရွံကြတယ်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို မရွံဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောရဲတယ်..။ အဲဒါက ကျွန်တော် တစ်ခြားသူတောင်းစားတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ပဲ..။"
" ကျွန်တော် SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းကို နားလည်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ strength ဟာ ရွံစရာကောင်းမနေတာပါ။ Opportunities နဲ့ Threats ကတော့ အပြင်က အခြေအနေတွေပါ။ ဒီမြို့မှာ လူဦးရေများတာတို့၊ မြို့ရဲ့ အင်္ဂါရပ်ကို မြှင့်တင်မှာတို့ပေါ့ဗျာ"
"ကျွန်တော် အသေးစိတ်တွက်ချက်ဖူးတယ်ဗျ။ ဒီနေရာမှာ တစ်နေ့ကို လူဦးရေ သောင်းဂဏာန်းလောက် ဖြတ်သန်းသွားလာနေတာ.။ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေများတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတွေ ပိုများတာပေါ့ဗျာ.. သီအိုရီအရ ပြောရရင် အကယ်၍ ကျွန်တော်ဟာ တစ်ရက်ကို လူ၁ယောက်ဆီက တစ်ကျပ်ပဲတောင်းဦးတော့၊ ၁လကို သုံးသိန်းလောက်ဝင်နိုင်တယ်..။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်းတစ်နေ့တည်းနဲ့ လူအဲလောက်အများကြီးဆီက တောင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး.။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရတယ်၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ target customer၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ potential customers ဆိုတာပေါ့ဗျာ"
သူက တံတွေးမျိုပြီး ဆက်ပြောပြန်တယ်.."ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ target customers က စုစုပေါင်း ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့လူအရေအတွက်ရဲ့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပေါ့..၊ အောင်မြင်နိုင်ခြေက ၇၀%ရှိတယ်..။ potential customers က ၂၀% ရှိတယ်၊ အောင်မြင်နိုင်ချေက ၅၀%၊ ကျန်တဲ့ ၅၀%ကတော့ကျွန်တော် လက်လျှော့ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တယ်.။ ကျွန်တော့်မှာ သူတို့နဲ့ ကံစမ်းနေဖို့ အချိန်မလောက်လို့""အဲဒါဆို ခင်ဗျားရဲ့ customer ကို ခင်ဗျား ဘယ်လို သတ်မှတ်လဲ" ကျွန်တော် မေးလိုက်မိတယ်..။
"အရင်ဆုံး target customer ကို ပြောပြမယ်။ ခင်ဗျားတို့လို လူငယ်တွေပေါ့၊ ၀င်ငွေရှိတယ်.။ ရက်ရောတယ်။ ဒါ့အပြင် စုံတွေရောပဲ။ သူတို့က တစ်ဖက်သားရှေ့မှာ မျက်နှာပျက်မခံချင်လို့၊ ရက်ရက်ရောရော ပေးတတ်ကြတယ်၊ ဒုတိယအနေနဲ့က တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမလှလေးတွေကို ကျွန်တော်က potential customer လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်..။ သူတို့က ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေကြောက်တတ်ကြတော့၊ အများအားဖြင့် ပေးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီ လူအုပ်စု၂မျိုးလုံးကို အသက် ၂၀ကနေ ၃၀ကြားကို ထားတယ်.။ သိပ်အသက်ငယ်ရင်လည်း ၀င်ငွေသိပ်မရှိတတ်ကြဘူးလေ။ အသက်အရမ်းကြီးရင်လည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးလောက်ပြီ။ ငွေရေးကြေးရေး မိန်းမက ထိန်းချုပ်နေပြီ။ အဲလို လူတွေက ဘာမှ မျှော်မှန်းစရာ သိပ်မရှိဘူး"
"အဲဒါဆို ခင်ဗျားတစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်လောက် ရတတ်သလဲ"ကျွန်တော် မေးလိုက်တယ်.။
"Monday to Friday ကတော့ နည်းနည်း ပါးတယ်ဗျ၊ ၂၀၀လောက်တော့ ရတာပေါ့..။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင် လေးငါးရာလောက်တော့ ရတာပေါ့ဗျာ"
"အဲလောက်တောင် များများ ရလား"
ကျွန်တော်နည်းနည်း သံသယရှိနေတာ တွေ့တော့ သူက ကျွန်တော့ကို တွက်ပြတယ်..။"ခင်ဗျားတို့လိုပဲ ကျွန်တော်လည်း ၁ရက်ကို ၈နာရီ အလုပ်လုပ်တယ်ဗျာ။ မနက် ၁၁နာရီကနေ ည ရနာရီထိ၊ စနေ၊တနင်္ဂနွေလည်း မနားဘူး။ ကျွန်တော် တခါတောင်းတဲ့ ကြာချိန်က ၅မိနစ်ပေါ့။ လမ်းလျှောက်ပြီး ပစ်မှတ်ရှာတဲ့ အချိန်တွေကို နှုတ်လိုက်ရင်၊ အကြမ်းအားဖြင့် ၁မိနစ်ကို ၁ယောက်၊ ၁ကျပ်နှုန်းနဲ့ရတယ်။ ၈နာရီဆိုတော့ ၄၈၀ ရတာပေါ့။ ပြီးတော့မှ အောင်မြင်နိုင်ခြေ ၆၀% (၅၀%+၇၀%)/၂ နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် ၊ ၃၀၀ နီးပါးလောက်ရတာပေါ့။ customer ကို အမြီးဆွဲပြီး တစ်လမ်းလုံး လျှောက်လိုက်နေလို့ လုံးဝမဖြစ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူသာ ပေးချင်ရင် အစောတည်းက ပေးပြီးနေပြီလေ။ အဲဒါကြောင့် ဇွတ်လိုက်နေလည်း အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်မှာကိုး။ အဲဒါကြောင့် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ အချိန်တွေကို မပေးချင်တဲ့ customer ဆီမှာ မဖြုန်းပစ်ရဘူး။ နောက်တစ်ယောက် ရှာတာကမှ ဟုတ်သေးတယ်။"
"ခင်ဗျား ဆက်ပြောပါ။" ကျွန်တော် ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်..။ ဒီနေ့တော့ ပညာတွေရပြီ..။
"တစ်ချို့က သူတောင်းစားဟာ ကံကိုမှီပြီး စားရတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို မသတ်မှတ်ဘူး။ ဥပမာ ပြောမယ်ဗျာ..။ မိန်းကလေးပစ္စည်းတွေချည်းပဲ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှေ့မှာ အမျိုးသားချောချော၁ယောက်နဲ့၊ ကောင်မလေး ချောချောလေး ၁ယောက်ရပ်နေရင် ဘယ်၁ယောက်ကို ခင်ဗျား တောင်းမလဲ။" ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပြီး၊ မသိဘူးလို့ ဖြေလိုက်တယ်..။
"ခင်ဗျား ယောက်ျားလေးကို သွားတောင်းသင့်တယ်.။ ဘေးမှာ မိန်းမချောလေး ရပ်နေတော့၊ သူမပေးဘဲ နေရမှာ ရှက်လိမ့်မယ်။ ကောင်မလေးသာ သွားတောင်လို့ကတော့ ကြောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဝေးဝေး ရှောင်သွားလို့ရတာပေါ့။"
"ခင်ဗျားကို နောက်ဥပမာ၁ခု ထပ်ပေးမယ်။ တစ်နေ့က shopping mall ၁ခု ရှေ့မှာ ပစ္စည်းဝယ်ပြီးခါစ ထွက်လာတဲ့ အထုပ်တွေနဲ့ မိန်းမငယ် ၁ယောက်ရယ်၊ ရေခဲမုန့်စားနေတဲ့ လူငယ်ပိုင်း စုံတွဲ၁တွဲရယ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားထားတဲ့ laptop အိတ်ဆွဲထားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရယ်ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်ကို သုံးစက္ကန့်စာလောက်ပဲ အကဲခတ်လိုက်တယ်.။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးဆီကို သွားတောင်းလိုက်တယ်။ သူက အိတ်ထဲက အကြွေစေ့ ၂စေ့ကို နှိုက်ပေးပြီး ထူးဆန်းတကြီးကျွန်တော့်ကို ဘာလိုသူ့မှတောင်းတာလဲလို့ မေးတယ်။ ကျွန်တော်က ဟိုစုံတွဲက ရေခဲမုန့်စားနေကြတာ၊ ပိုက်ဆံနှိုက်ဖို့လက်မအားဘူး၊ ဟို ယောက်ျားကတော့ အရာရှိပိုင်း ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းဆိုတော့ အကြွေမပါလောက်ဘူး၊ မင်းကတော့ ခုမှ ပစ္စည်းဝယ်ပြီးထွက်လာတာဆိုတော့၊ သေချာပေါက် အကြွေပါမှာကြောင့်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်.။"
"သိပ္ပံနည်းကျ တောင်းရမယ်။ နေ့တိုင်း ဂုံးတံတားပေါ် သွားထိုင်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ဂုံးတံတားပေါ်က ဖြတ်ကြတဲ့သူတွေက အလျင်စလိုတွေချည်းပဲ။ ဘယ်သူက ဂုံးတံတားပေါ်အားယားယား သွားလျှောက်နေမလဲ။ လှေကား တက်လိုက် ဆင်းလိုက်နဲ့ မောကမောသေး၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပညာနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားရမယ်ဗျ၊ ဗဟုသုတလိုက်စားတာ လူတစ်ယောက်ကို ထက်မြက်လာစေတယ်။ ထက်မြက်တဲ့သူဟာ အဆက်မပြတ် ဗဟုတ်သုတ ရှာမှီးနေမှ လူတော်ဖြစ်လာမှာပေါ့။၂၁ရာစုမှ အလိုအပ်ဆုံးက လူတော်တွေပဲလေဗျာ"
"တစ်ခါက လူတစ်ယောက် ကျွန်တော်ကို ငွေငါးဆယ်ပေးပြီး တိုက်အောက်ကနေ နီရေ လွမ်းလိုက်တာလို့ အခါ၁၀၀ သွားအော် ပေးရမတဲ့။ ကျွန်တော် တွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ တစ်ခါအော်ရင် ငါးစက္ကန့်လောက်အော်ရမယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခါတောင်းတာနဲ့ ညီမျှတယ်။ ရတာကကျတော့ ပြား၅၀ပဲရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော် ငြင်းလိုက်တယ်။"
"ဒီ စိန်းကျိန့်မြို့မှာ သာမာန် သူတောင်းစားဆိုရင် ၁လကို ၈၀၀/တစ်ထောင် ရအောင် တောင်းနိုင်တယ်။ ကံကောင်းရင်တော့ ၂၀၀၀ စွန်းစွန်းရတာပေါ့..။ စိန်းကျိန့် ၁မြို့လုံး သူတောင်းစား အယောက်၁သိန်းမှာ ၁၀ယောက်လောက်ပဲ ၁လကို ၁သောင်းအထက်ရအောင် တောင်းနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီ ၁၀ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပဲ..။ ပြီးတော့ ၀င်ငွေက ငြိမ်တယ်။ အများအားဖြင့် အရမ်းကြီး အတက်အကျမရှိဘူး။"
"ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်တဲ့ သူတောင်းစားလို့ အမြဲပြောတယ်။ အခြားသူတောင်းစားတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို အဲဒါ ပိုက်ဆံများများ ၀င်လို့ပျော်တာလို့ ပြောကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်က သူတို့ကို ပြန်ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မှားနေတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့ စိတ်ရှိနေလို့ ၀င်ငွေများနေတာလို့။"
"တောင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အလုပ်ပဲဗျ။ အဲဒီတော့ အလုပ်ကပေးလာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို ခံစားတတ်ရတယ်.။ မိုးရွာတဲ့နေ့ လူသွားလူလာနည်းတဲ့အခါ၊ တခြား သူတောင်းစားတွေက ညည်းတဲ့သူညည်း အိပ်တဲ့သူ အိပ်နေကြတယ်။ အဲလို လုပ်လို့ လုံးဝမဖြစ်ဘူးဗျ။ စိတ်ထဲကနေ ဒီမြို့ရဲ့ အလှကို ခံစားရမယ်..။ ညအလုပ်သိမ်းလို့ အိမ်ပြန်တဲ့အခါ မိန်းမနဲ့ ကလေးကို ခေါ်ပြီး ဈေးလေးဘာလေးပတ်၊ အစားလေးဘာလေးစားပေါ့၊ ညရှုခင်းလေးခံစားရင်း တစ်မိသားစုလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့..။ အဲလိုဆိုရင် ဒီဘ၀ အသက်ရှင်ရတာ အဓိပ္ပါယ်မမဲ့တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ အကယ်၍များ လုပ်ငန်းတူတွေ့လို့ တစ်ခါတစ်လေလည်း အကြွေလေး ဘာလေး ပစ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ သူတို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်း ထွက်သွားတာကို တွေ့တော့လည်း ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပြန်မြင်နေသလိုပေါ့"
"ခင်ဗျားက မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့?" ကျွန်တော်အလန့်တကြားမေးလိုက်မိတယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေတောင် ငဲ့ကြည့်သွားကြတယ်။
"ကျွန်တော်မိန်းမက အိမ်ရှင်မ တာဝန်ကို အပြည့်ယူထားတယ်။ ကလေးက မူလတန်းတက်နေပြီ။ ကျွန်တော် ဖူထျန် ရပ်ကွက်ဘက်မှာ တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်း installment နဲ့ ၀ယ်ထားတယ်.။ ၁၀နှစ်ခွဲပေးရမယ်.။ နောက် ၆နှစ်ဆို ကြေပြီဗျ.။ ကျွန်တော် ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော့သားလေး ကြီးလာရင် တက္ကသိုလ်မှာ Marketing Major ယူခိုင်းရမယ်။ ပြီးရင် အဖေ့အမွေဆက်ခံပြီး ကျွန်တော့်ထက်သာတဲ့
"လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်တုန်းက PROFIBUS ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ Market planning လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်တုန်းကတော့ Sales Manager အဖြစ် promotion ရတယ်ဗျ။ ၁လကို ၅၀၀၀နဲ့ပေါ့..။ အဲချိန်တုန်းက ၁သောင်းကျော်တန် Samsung Laptop ၁လုံးကို installment နဲ့ ၀ယ်ခဲ့တယ်။ ၁လကို ၂၀၀၀သွင်းရတယ်။ သေမလိုရှင်မလိုပဲဗျာ..။ နောက်တော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားတယ်။ ဒီလိုသာဆက်သွားရင်တော့ ၁သက်လုံး လူမွှေးလူတောင် ပြောင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့။ အဲဒါနဲ့ အလုပ်ထွက်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီမြို့ကို ပြောင်းလာပြီး သူတောင်းစားလာလုပ်နေတာ။
ကျွန်တော်က အဆင့်မြင့် သူတောင်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာဗျ.. "
သူ့စကားလည်း ဆုံးရော ကျွန်တော် စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ပြောလိုက်မိတာက..."ကျွန်တော့်ကို တပည့်အဖြစ်လက်ခံနိုင်မလားဗျာ...."
Posted by 925 at 23:480comments
Posted by ရဲဂျာ on December 1, 2012 at 8:58pm in Virus နည်းပညာBack to Virus နည်းပညာ Discussions
SVCHOST.EXE က Flash Drive များမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာဆီသို့ အချိန်မရွေးရောက်နိုင်ပါတယ်.. သူတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရရင် Signature တွေအနေနဲ့ ဒီလိုပြလေ့ရှိပါတယ်..
တကယ်တော့ SVCHOST ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ System ထဲမှာအမှန်တကယ်အလုပ် လုပ်နေတဲ့ File ပါ..ခုပြောတဲ့ SVCHOST.EXE ကတော့ သူလို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပုံမှားရိုက်တာပေါ့..Process ထဲကနေ သူ့ကို Kill မယ်ဆို အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ System File နဲ့မှားယွင်းတတ်ပါတယ်.. အချို့ကတော့ သူ့ကို Process ကနေ Kill လိုက်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူကပြန်တက်လာ ပါတယ်.. Antivirus ကလည်းသူ့ကိုရှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက System File ယောင်ဆောင်ထားတာကိုး..
ကျွန်တော့်မှာတော့ သူ့ကိုသတ်စရာနည်းလေးရှိပါတယ်.. အကယ်လို့များ မိမိကွန်ပျူတာမှာ ၀င်နေရင်စမ်းကြည့်ကြပါလား..
ဘယ် User Name နဲ့ဝင်သလဲဆိုတာ အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်..
ရဲ့ User ဆိုတဲ့ Tab အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
2. Run Command (Windows+R) ကိုခေါ်ပြီး Restore လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ Hide Protected Operating Files System ကို Uncheck လုပ်ပေးပါ..
Operating Files System ကိုဖော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူကအတည်ပြုချက်တောင်း ပါလိမ့်မယ် Yes ကိုနှိပ်ပါ..အဲဒီအခါ Restore Folder အောက်မှာ svchost ဆိုတဲ့ Fileရယ်၊ Data ဆိုတဲ့ Folder လေးရယ် မှိန်မှိန်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
ရဲရဲသာဖျက်လိုက်ပါ.. Shift+Del နဲ့နော်.. သင့်ရဲ့ စက်ကိုဒုက္ခပေးနေတာ အဲဒီကောင်ပေါ့..
3. နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Run Command ကိုခေါ်ပြီး msconfig ကိုရိုက်ထည့်ပါ.. Enter နှိပ်ပါ။startup Tab ကိုသွားပါ.. အဲဒီအောက်မှာလည်း svchost ဆိုတာရှိနေပါလိမ့်မယ်..
Uncheck လုပ်ပေးပါ.. သူက သင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်တိုင်း svchostအလုပ်လုပ်နေအောင် အဲဒီကနေခိုင်နေတာပါ.. ပြီးရင် OK နှိပ်ပါ.. Restartပြုလုပ်ပေးဖို့လိုကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်.. Restart ကိုနှိပ်ပါ..စက်ပြန်တက်လာရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်..
ဒီနေရာမှာ ယူလိုက်ပါ။ ဒီ file ကို run ပြီးရင်တော့ task manager ထဲမှာ private cam နဲ့ စတဲ့ process တွေကို end task လုပ်ပြီး ဒီ file ကို ပြန် run လိုက်ပါ။Folder တွေအောက်မှာ ပုန်းခိုနေတဲ့ .exe တွေကိုတော့ သင်ဖြတ်ပြစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပြင် regedit ထဲက [HKCU \_Software \_Microsoft \_Windows\_CurrentVersion \_Run] ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုလဲဖြတ်ပြစ်ပါ။ msconfig ထဲက setup မှာလဲ မလိုအပ်တဲ့ file တွေကို uncheck
ပြုလုပ်ပေးပါ။ သင့် computer ကို restart ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
scanwith ဆိုတဲ့ website လေးကို လူသိများကြမှာပါ ဗိုင်းရပ် နဲ့ ပတ်သတ်ရင် တော်တော် စုံပါတယ် update, removal tool,antivirus software အားကိုးလောက်တဲ့ site လေးပါ။ မသိသေးသူများ အတွက်
Loikaw Virus ကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်သည့် Removal Tool တစ်ခု..
Loikaw Virus ကိုရှင်းလင်းပေးနိုင်သည့် Removal Tool တစ်ခုပါ။ Loikaw Virus သည် USB Drive များမှ အဓိကကူးပြီး ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေစဉ် အချိန်အတွင်း Message Box များဖြင့် အနှောက်အယှက်ပေးခြင်း၊ အသုံးပြုနေသော Program သို့ စာကြောင်းများပေးပို့ခြင်း၊ bat file, cmd file များကို အသုံးပြု၍မရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အခြား အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေ နိုင် သော ကိစ္စများကို ဖြစ်စေပါသည်။ Loikaw Virus ၀င်ရောက်ခံရသော ကွန်ပျူတာ များ၏ Desktop တွင် Virus Information.txt ဟုသောဖိုင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို Virus ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပါက ဒါလေး ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ Virus ၀င်ရောက်ထားသော ကွန်ပျူတာတွင် Loikaw Virus Removal ကို Run လိုက်ခြင်းဖြင့် Virus ကို အပြီးတိုင် ရှင်းလင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် Virus အများစုဟာ executable file တွေဖြစ်ကြပါတယ်...
ဥပမာ.. chrome.exe, system.bat , flashy.com စသဖြင့်ပေါ့ .. သူတို့ဟာကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေရင်တောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်မှ သွားမဖွင့်ရင်/ သွားမ run မိရင် ကွန်ပျူတာကို ဘာမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး... ဒါကြောင့် မှတ်ထားရမှာက လူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မပါ ၀င်ပဲ Computer Virus သည် မပျံ့နှံ့ မကူးစက်နိုင်ပါ...Virus ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်...forward E-mail က attached file တွေ၊ memory stick(flash/thumb drives) တွေ၊ Full sharing ကနေ virus infected file ထည့်တာ တွေ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း မသိပဲနဲ့ Virus infected file ကို share လုပ်မိတာတွေ .. စသဖြင့်ပေါ့...ဗျာ
Malware ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကား ၂ လုံး Malicious Software ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေက အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ virus လို program တွေပါပဲ.. အဲဒိ Malware ကကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊ မသိစေပဲ single computer / server / computer network ထဲ ၀င်ပြီး ကွန်ပျူတာ System ပျက်ဆီးစေနိုင်အောင် ၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်..Malware တစ်ခုမှာ Computer VIrus , worms, trojan horses, most rootkits, spyware, dishonest adware, crimeware and other malicious and unwanted software တွေပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်..
Trojan horse ကို Trojan လို့လည်းခေါ်ပါတယ်.. Trojan ဆိုတဲ့ မြင်းရုပ်ကြီးအကြောင်း ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ သင်ဖူးကြမှာ ပေါ့.. Tri ဇာတ်ကားလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ... အဲဒိထဲကလိုပဲ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်... ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးဝင်တဲ့ Software တွေမှာ ထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်... ဥပမာပေါ့ဗျာ... Game တစ်ခုကို Install ပြီးဆော့နေပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာ Hacker တွေ Cracker တွေက ကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်မွှေနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်.. အဲဒီတော့ အဲဒိ Game ကို Trojan horse လို့ခေါ်တာပေါ့ .. တစ်ကယ်တော့ Game က တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ Game ပဲ.. ဒါပေမယ့် Virus infected ဖြစ်နေတဲ့ Game လို့ပြောရလိုဖြစ်နေတာပေါ့.. နမူနာ Trojan Horse ကတော့ waterfalls.scr ဆိုတဲ့ free waterfall screen saver ပဲဖြစ်ပါတယ်..
သူကတော့ သူခိုးပေါ့နော်.. Spy တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာသိကြမှာပါ.. သူလဲအဲလိုပါပဲ...သူက ကွန်ပျူတာကို ထိခိုက် ဖျက်ဆီးချင်မှ ဖျက်ဆီးမယ်.. ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတဲ့ user ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက်တွေ၊ အရေးကြီး တဲ့ Data တွေကို သူ့ရဲ့ Main server တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် သတင်းပို့ပေးနေတယ်... Spyware တွေက များသောအားဖြင့် Web browser တွေကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်... ပြီးရင် သူက Browser home page ကိုပြောင်းထားတတ်ပါတယ်..သင့်ကို Error message တွေ အမျိုးမျိုးပြမယ်..(ဥပမာ- သင့်ကွန်ပျူတာမှာ problems တွေများနေပြီ..အဲဒါတွေပြင်ချင်ရင် အောက်ကခလုတ်ကို နှိပ်ပါ) စသဖြင့် ဆွဲဆောင်မယ်၊ သင်က link တစ်ခုကို click လိုက်ပေမယ့် သင်မဖွင့်ပဲနဲ့ အခြား Porn Site တွေ အလိုလိုပွင့်လာ မယ် စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ... တစ်ချို့ လူတွေက http cookie တွေကို Spyware တွေလို့ ထင်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒိ cookie ထဲမှာ Spyware က track လုပ်နိုင်တဲ့ Data တွေပါလာတတ်တာကြောင့်Spyware Remover တော်တော်များများက Cookie တွေကို ဖျက်ပစ်ကြတာပါ. Spyware ကို ကာကွယ်ချင်ရင်တော့ pop-ups ကျလာတဲ့ link တွေကို ရှောင်တာကောင်းပါတယ်... Free Spyware Remover တွေနဲ့လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်...
သူက user password တွေ၊ links တွေ၊ အချက်အလက်တွေ ကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး သူ့ကို Run ထားတဲ့လူက ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီး user data တွေကို ခိုးယူနိုင်တာပေါ့.... ဥပမာပြောရရင်
http://www.mmcfamily.org/group/virus/forum/topic/show?id=3003595%3ATopic%3A1885468&xgs=1&xg_source=msg_share_topic မှ ...
Posted by 925 at 18:390comments
Posted by 925 at 18:360comments
တကယ်ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။ ရေနဲ့မောင်းမယ်ဆိုတော့ ကားရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုလည်းလို့ အများက စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ အင်ဂျင်က hydro-tech converter ဖြစ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်ယူပြီး ပါဝါဆဲလ်အဖြစ် ဖန်တီးလို့ ကာ
းကို မောင်းပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အိတ်ဇောပိုက်မှာ ထွက်မယ့် အငွေ့က ကာဘွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်မဟုတ်ပဲ ရေငွေ့များ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုးယခင်အချိန်ခါက ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်လိုလည် မဟုတ်ပါဘူး။ ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်တုန်းက ရေနွေးငွေ့ဖိအား-Pressure အသုံးပြုမှုကို အခြေခံတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ယခု ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြောင်းလဲ အင်ဂျင်ကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုပြီး သာမန် လောင်စာဆီ အင်ဂျင် ပေါက်ကွဲမှု လိုမျိုး စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ Ryunosuke Band လို့အမည်ရတဲ့ တီးဝိုင်း က ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ ဖျော်ဖြေပွဲ သွားလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ အသက်ကတော့...
・山岸竜之介 Ryunosuke Yamagishi (age 9) ဂစ်တာ နဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်
・田中廉 Ren Tanaka (age 9) ဒရမ်
・堀敬人 Keito Hori (age 12) ဘေ့စ်
ချစ်စရာကလေးတွေရဲ့ တင်ဆက်မှုလေးကို အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော် :)
Posted by 925 at 21:082comments
ပြီးခဲ့တဲ့လက အထူးအဆန်းသတင်းတပုဒ် ကြည့်လိုက်ရတယ်.. အတော်ကိုထူးဆန်းအံ့သြဖို့ကောင်းလိုက်တာ .. ဘွဲ့ရ ပညာတတ် လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့.. သူ့ရဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာအသိဥာဏ်တွေ တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေ ကင်းမဲ့ကုန်သလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး...
ဖြစ်ပုံက ဂလို ပါ... အိမ်ထောင်သည် ညီအကို ၂ ယောက် တအိမ်ထဲ မိဘနဲ့ အတူနေကြတယ်..
သူတို့ကိုယ်စီမှာ သားသမီးတွေနဲ့ပါ .. ညီ ရဲ့သားငယ်လေးက ၁ နှစ်အရွယ်လေး .. အဖွားက ကလေးကို အချစ်ပိုပုံရတယ်.. အဲဒါကိုချွေးမ အကြီးက မကျေနပ်ဘူး.. ကြာလာတော့ အဖွားက အဲဒိမြေးကို ဘဲချစ်တယ်..သူ့ကလေးတွေကျမချစ်ဘူး မတရားဘူးဆိုပြီး ကလေးအပေါ် မကာင်းတဲ့စိတ်တွေ အူတိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပီး... သူဘာတွေလုပ်မိတယ် ထင်ပါသလဲ.....
ဆေးရုံကြီးကို အရေးပေါ်ကလေးတယောက်ရောက်လာလုိ့ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် နဲ့ နာ့ပ်စ် တွေ အလုပ်ရှုပ်ကုန်ပါတယ် .. ကလေးက သတိလစ်နေပါပြီ .. ၊ ကလေးကို စမ်းသပ် ပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်တော့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အနှိပ်စက်ခံထားရတာတွေ့လိုက်ရတယ်...
ဓါတ်မှန်ရဲ့အဖြေက ကလေးရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ လက်ချုပ်အပ် ၃ ချောင်း ထိုးစိုက်ထားတယ် .. နား ၂ ပေါက် နဲ့ နှာခေါင်းပေါက်တွေ ထဲမှာ စူပါဂလူး ၃ စက္ကန့်အမြန်ကပ် ကော်ရည်တွေထဲ့ထားတယ်... ကဲ...
ကလေးက သတိလစ်နေတာ ၂ ရက်ရှိနေပြီ.. ဆရာဝန်တွေရဲ့အပြောကတော့.. အဲဒိကလေး.. ရုက္ခဗေဒလူသားဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့လေ.... မဟုတ်ရင်လဲ ဦးဏှောက်ပျက်နိုင်တယ်တဲ့ .. ၊
တော်တော်ခက်တဲ့လူကြီးတွေ ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ ကလေးတွေကို ရက်စက်လိုက်ကြတာ .. ကလေးက ကြားထဲကနေ ဓါးစာခံဖြစ်ရတယ်လို့ ... အဲဒိချွေးမကို တရားစွဲအရေးယူထားပါတယ်..
ကလေးရဲ့သတင်းကတော့ ထပ်မကြားရတော့ပါဘူး .. ။။။။
နောက်သတင်းတခုကတော့ ကြာပါပီ မနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ..
လင်မယား၂ယောက် ခေါက်ဆွဲဆိုင်ဖွင့်ပြီးစီးပွါးရှာကြတယ်.. မနက်စောစော ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတုန်း.. စကားများကြလေရော.. တဖြေးဖြေးနဲ့ စကားသံတွေကကျယ်လာကြတော့ သူတို့ရဲ့ ၁၀လ အရွယ် သမီးငယ် လေးက အလန့်တကြားနဲ့ အော်ငို .. ယောက်ျားက ကလေးကိုပါမဲပါလေရော.. နားငြီးတယ်..မငိုနဲ့လို့ အော်ဟောက်တော့တာပါ...
လင်မယား စကားများရာကနေ .. ကလေးဖက်ကိုလှဲ့ကြရောအဖေကအော်လေ သမီးလေးကငိုလေ .. အမေကလဲ ယောက်ျားကို .. ကလေးကိုမမဲနဲ့ ကလေးနဲ့မဆိုင်ဘူး ဆိုပြီးရန်တွေ့ ... သမီးလေးက ငိုရင်းသူတို့ရှိရာကို ယိုင်တိယိုင်တိုင်လေးလျှောက်လာတယ် ...
ယောက်ျားက ဟင်းချိုအတွက် အိုးကြီးတလုံးထဲရေထဲ့ပြီးကျိူနေတာ.. အိုးထဲကရေတွေက ပွက်ပွက်ဆူနေပြီ.... ကလေးက ငိုရင်း အမေဆီကိုလာတယ်.. အဖေကနားငြီးတယ် တိတ်ဆိုပီးအော်.. အော်လေ ပိုငိုလေ.. နောက်တော့ အဖေက
နင်ဆက်ငိုနေရင် ဒီအိုးကြီးထဲပစ်ချလိုက်မှာနော်.. တိတ်တော့ .. တဲ့
အမေက အောင်မာ.. ရှင်ပစ်ချရဲရင်ပစ်ချလိုက်လေ.. သတ္တိရှိရင် ပစ်ချလိုက်စမ်းပါ ဆိုတော့...
ဆေးရုံကို အရေးပေါ် မီးပူလောင်တဲ့ ၁၀ လသားကလေး သဘက်ကြီးနဲ့ပတ်ထားပြီး
ရောက်လာတော့ ဆရာဝန် နာ့ပ်စ် တွေ အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်ပါလေရော... ကလေးရဲ့ တကိုယ်လုံး အပူလောင်ဒဏ်ရာတွေ အသားနီတွေတောင်လန်လို့.. ကလေးကလဲ နာတယ် နာတယ်နဲ့ငိုငြီးနေတာ.. မကြည့်ရက်စရာပါဘဲ...
ကလေးအဖေက တကယ်ဘဲ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ အိုးကြီးထဲကို ပစ်ချလိုက်တာကိုး...
ကျမ မျက်လုံးမှိတ်ပီး ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ်.. အမလေးလေး.. ရေပွက်ပွက်ဆူအိုးထဲ ပစ်ထဲ့လိုက်ရင် ..
ကျမရဲ့တကိုယ်လုံး ရေပူတွေထိတာ .. တီကောင်ကိုဆားနဲ့တို့တာထက်တောင် ဆိုးနေမှာ .. ကျမ မတော်တဆ အသေးစား အပူလောင်ဖူးပါတယ် .. တော်တော်ခံစားရတာပါ.. တကိုယ်လုံးဆို ဘယ်လိုနေမလဲနော်.. ..
ကလေးအမေက ကလေးကို အိုးထဲကနေ ဆယ်ယူပီး ရေအေးနဲ့လောင်းတယ် ပီးတော့
အ၀တ်တွေကိုချွတ်တာ အရေပြားတွေ အ၀တ်မှာကပ်ပါကုန်တယ် ..သဘက်ကြီးနဲ့ပတ်ပြီး ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးလာပို့ပေမဲ့.. ကလေးက ၃ ရက်မြောက်မှာ ဆုံးသွားပါတယ်.. ကလေးအဖေကတော့ အပြစ်လွတ်တယ်တဲ့.. ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာ ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာလဲမဟုတ် .. လူသတ်မှုလဲမမြည်ဘူးတဲ့ ... ကဲ....
လူကြီးတွေရဲ့ ဒေါသတွေ မနာလို သ၀န်တိုမှုတွေ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေအပေါ်ကို
Posted by 925 at 05:252comments
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အုိုဘားမားရဲ့ လုံခြုံရေး
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ မေလထဲကလဲ အုိုဘားမား ဇနီးမောင်နှံနဲ့အဖွဲ့ အင်္ဂလန်ကုို လာလည်တော့လဲ လုံခြုံရေးစနစ် များလွန်းလုို့ အင်္ဂလိပ်တွေတောင် ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
လူ ၅၀၀ ကျော်လောက်ပါတဲ့ အုိုဘားမားအဖွဲ့ထဲမှာ အိမ်ဖြူတော် အရာရှိတွေ၊ သမ္မတကုို အရေးပေါ်ကုသဖို့ ဆရာဝန် ၆ ဦးပါ ဆေးအဖွဲ့၊ သမ္မတအတွက် စားဖုိုမှူးတွေ၊ လက်နက်ကုိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ၂၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ သမ္မတ ကုိုယ်ရံတော် စုံထောက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာ ခရီးလှည့်နေစဉ် အမေရိကန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့သယ်လာတဲ့ စီးတော်ယာဉ် The Beast ကုို အုိုဘားမား စီးနင်း ပါတယ်။ အုိုဘားမားကားကုို တခြားမော်တော်ယာဉ် အစီး ၂၀ ကခြံရံပီး ဒီကားတန်းကုိုမှ ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်တွေက ဦး ဆောင်ပါတယ်။
အုိုးဘားမားရဲ့ အခြံအရံတွေထဲမှာ ညူကလီယာ ဒုံးပျံတွေ ပစ်လွှတ်ဖုို့ လျို့ဝှက် ကုတ်နံပါတ်တွေပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကုိုင် အရာရှိတဦးအပြင် အမေရိကန်နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
ဌာန လက်အောက်ခံ ဌာနကြီး ၆ ခုရဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်တွေလဲ ပါဝင်ပါ တယ်။ အုိုဘားမား စီးတဲ့ Air Force One လေယာဉ်ကြီးဟာ အားကစားရုံတွေ ခွဲစိတ်ခန်းတွေပါဝင်တဲ့ ဧရာမ မုိုးပျံဟော် တယ်ကြီးအသွင် ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ညူကလီယာပေါက်ကွဲမြှုဖစ်ခဲ့ရင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကာ ကွယ်တဲ့စနစ်လဲ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
တည်ကြက် လေယာဉ်တစီးခြံရံထားပြီး ဇိမ်ခံဟော်တယ်ကြီးအသွင် အုိုဘားမားစီးတော်မူတဲ့ Air Force One လေယာဉ် ကြီးဟာ တနာရီပျံသန်းတုိုင်း ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂သိန်းနီးပါးရှိပါသတဲ့။ အိုဘားမားစီးမဲ့ မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်ကလဲ ဒုံးကျည်ရန်ကို ရှောင်လွဲနိုင်တဲ့ မီးကျည်တွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
အိုဘားမားစီးမဲ့ မရင်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ တည်ကြက်ယာဉ်တွေအပါအ၀င် ယာဉ်မျိုးစုံ ၄၅ စီးကို အိုဘားမားသွားမဲ့ ခရီး စဉ် မတိုင်ခင် C-17 ဂျက်လေယာဉ်ကြိးနဲ့ ကြိုတင် ပို့ထားရပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် သတင်းစာသမားတွေ တီဗီံ သမားတွေ အ တွက် ဘတ်စကား ၂ စီး၊ ရေဒါဖျက်တဲ့ယာဉ်တစီးနဲ့ SWAT ကွန်မင်ဒိုတွေအတွက် ကားတစီး ပါလေ့ ရှိပါတယ်။ သမ္မတ အို ဘားမားရဲ့ လန်ဒန်ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတမိန့်ခွန်းရေးပေးသူ ၄ ဦး ပါလာပါတယ်။
အုိုင်ယာလန်ကအပြန် လန်ဒန် ဘာကင်ကမ် ဘုရင်မနန်းတော်ကုို အုိုဘားဘား ညအိပ်လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ ကင်ကမ် နန်းတော်ဆုိုတာ အင်္ဂလန် ပြည့်ရှင် အင်မတန် ချမ်းသာတဲ့ ဘုရင်မနန်းတော်မုို့ အစစ ဘယ်လောက် ပြည့်စုံ မလဲ ဧည့်ဝတ်ကျေမလဲ မှန်းကြည့်နုိုင်ပါတယ်။ အုိုဘားမား ဇနီးမောင်နှံထားမဲ့ နန်းတော်အခန်းဆိုတာကလဲ နယ်လဆင်မန် ဒဲလားတုို့ အမေရိကန်သမတ ကနေဒီတုို့ လာတုံးက တည်းခုိုခဲ့တဲ့ သမုိုင်းဝင် အခန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ဘဲ ဘုရင်မနန်းတော်အရာရှိတွေဘက်က ပြည့်စုံအောင် လုပ်ထားပါစေ…အမေရိကန် သမ္မတရဲ့ လုံခြုံရေး အရာရှိတွေအတွက်တော့ မပြည့်စုံဘူးလုို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမှာတင် အမေရိကန်ကနေ သမ္မတကုိုယ်ရံတော် လုံခြုံရေး စုံ ထောက်တွေ ယူလာတဲ့ ဗုံးဒဏ် ကာကွယ်နုိုင်တဲ့ မှန်နှစ်ထပ်ပုံစံ အလွှာတခုကုို အုိုဘားမားအိပ်မဲ့ အခန်းပြတင်း ပေါက် တွေမှာ အပြင်က ထပ်တပ်ခွင့်ပေးရမယ်လုို့ တောင်းဆုိုလာလုို့ နန်းတော်အရာရှိ အံ့အားတသင့် ဖြစ်ကုန်ပါသတဲ့။ ဒီကြားထဲ သမ္မတအုိုဘားမားရဲ့ ကိုယ်ရံတော် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့က နန်းတော်မြေအောက်ခန်းမှာ စစ်တပ်ပုံစံ အိပ်စင်တွေနဲ့နေရာ ယူ…ကုိုယ်ပုိုင် ဆက်သွယ်ရေး စက်ကိရိယာတွေတပ်ထားပါတယ်။
အုိုဘားမား လုံခြုံရေးစုံထောက်တွေ သေနတ်တွေ တကားကားနဲ့ အင်္ဂလန်ဘုရင်မ နန်းတော်ထဲမှာ သူတုို့ကုိုယ်ပုိုင်နန်း တော်အလား ပြေးလွှားနေလုိုက်ကြတာ ၂၄ ဆုိုတဲ့ တီဗွီဇာတ်လမ်းကြည့်နေရသလားထင်ရတယ်လုို့ မျက်မြင်သက် သေ တွေက ပြောပါတယ်။ အုိုဘားမား ကုိုယ်ရံတော်တွေဟာ သမ္မတကုို အရေးပေါ် သွေးသွင်းနုိုင်ဖို့ ပစ္စည်းတွေအပါအ၀င် ဆေး ခန်းအသေးစားလေးတခုကုို ဆေးရုံးသုံးစက်ကရိယာတွေနဲ့ နန်းတော်ထဲမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး အုိုဘားမားကုို အင်္ဂလန်ဘုရင်မအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သောက်ရေသန့်ကုိုတောင် တုိုက်ခွင့် မပေး နုိုင်၊ သူတုို့အမေရိကန်က သယ်လာတဲ့ သမ္မတအုိုဘားမား သောက်နေကျ သောက်ရေသန့်ကုိုသာ တုိုက်မယ်လုို့ အုိုဘား မား ကုိုယ်ရံတော်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေပြောတော့ နန်းတွင်းအရာရှိတွေ အံ့သြသွားပါတယ်။
Posted by 925 at 17:47 1 comments
iPhoneနှင့် iPad များဖြင့် ထိန်းချုပ် နိုင်မည့် iBulb မီးသီးများ
ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာ ပါရဂူ Apple က iPhone နှင့် iPad များဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ
ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် LED iBulb မီးသီးများကို စတင် တီထွင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ယင်းမီးသီးများ၏ ထူးခြားချက်မှာ အဝေးတစ်နေရာမှ iPhone နှင့် iPad များကို အသုံးပြု၍ ဖွင့်နိုင်၊ ပိတ်နိုင်ရုံမျှမက မီးအလင်းအမှောင်ကိုလည်း လိုသလို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ထို့ပြင် ယင်း iBulb မီးသီးများက ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်စနစ်ဖြင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး iPhone နှင့် iPad များမှာ သုံးစွဲထားသည့် iBulb Application များကလည်း ဘယ်အချိန်မှာ မီးဖွင့်ရမည် ပိတ်ရမည်ဆိုသည်ကို စိတ်တိုင်းကျ Program များရေးဆွဲပြီး အလိုအလျောက် စေခိုင်းနိုင်သည်။ ယင်း iBulb မီးသီးများ၏ တန်ဖိုးမှာ စတာလင်ပေါင် ၁၀၀ ကျော်မျှ ကျသင့်မည်ဟု Apple Store မှ သိရသည်။
Posted by 925 at 17:280comments
ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေပေါ်အိမ်ကလေး
ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေဆီကို အလည်အပတ်သွားမလား။
ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေပေါ်အိမ်ကလေးပါ။
Posted by 925 at 18:030comments
Outline ofaBurmese throne c. Konbaung
(၁) သီဟာသန ပလ္လင်-ခြင်္သေ့ရုပ်ခံ၍ ယမနေသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီးနန်းဦးပြဿဒ်ဆောင်နှင့် လွှတ်တော်၌ ထားရှိ
(၂) ဘမယာသန ပလ္လင်-ပိတုန်းရုပ်ခံ၍ ကရဝေးသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီးမှန်နန်းဆောင် (စက်တော်ခေါ်သည့်နေရာ) ၌ ထားရှိ
(၃) ပဒုမာသန ပလ္လင်-ပဒုမ္မာကြာပွင့်ခံ၍ သရက်သားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး အနောက်ဇေတ၀န်ဆောင် (မင်းတို့ကန်တော့ခံရန် နေရာ)၌ ထားရှိ
(၄) ဟံသာသန ပလ္လင်-ဟသာင်္ရုပ်ခံ၍ သင်္ကန်းသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး အရှေ့ဇေတ၀န်ဆောင် (မင်းတို့ဝတ်ပြုရန်နေရာ)၌ ထားရှိ
(၅) ဂဇာသန ပလ္လင်-ဆင်ရုပ်ခံ၍ စကားသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး ဗြဲတိုက်ဆောင် (မင်းတို့လက်ဆောင်ခံယူရာနေရာ)၌ ထားရှိ
(၆) သခါင်္သန ပလ္လင်-ခရုသင်းရုပ်ခံ၍ တောင်ပိန္နဲသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး လေသာဆောင် (တရားစီရင်ရာနေရာ)၌ ထားရှိ
(၇) မိဂါသန ပလ္လင်-သမင်ရုပ်ခံ၍ ရေသဖန်းသားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး တောင်စမုတ်ဆောင် (မင်းတို့အလှူတော်ရေစက်ချရာ
(၈) မယုရာသန ပလ္လင်-ဥဒေါင်းရုပ်ခံ၍ ပေါက်သားဖြင့် ထုလုပ်ပြီး မြောက်စမုတ်ဆောင် (ကန်တော့ပန်းသိမ်းရာနေရာ)၌ ထားရှိ
The Royal Throne of Myanmar
ဟူ၍ (၁၂) နေရာပါရှိသည်။
A Close Look at Thihayana Throne, Myanmar Photo by Myanmar Tourex Travels
Old Painting by Royal artist Saya Chone showing the Royal Audience Scence
ဒီအကြောင်းအရာကို မေးလ်ထဲမှရရှိပြီး တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်သည်။
Posted by 925 at 00:030comments
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး Golden Poison Frog
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံးသတ္တဝါစာရင်းထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ရွှေဖား ( ရွှေအဆိပ်ဖား ) Golden Poison Frog ကတော့ ထိပ်တန်းအဆိပ်ရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ရွှေဖားတစ်ကောင်မှထွက်တဲ့ ၁ မီလီဂရမ်အဆိပ်ဟာ ကြွက်ပေါင်း ၁ သောင်းကို သတ်လို့ရပါတယ်။ လူဆိုရင် အယောက် ၂၀ ၊ ဆင်ဆိုရင် အာဖရိကဆင် ၂ ကောင် သေလောက်အောင်ကို အဆိပ်ပြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့် ၁ ဂရမ်ရှိတဲ့ ရွှေအဆိပ်ဖားတစ်ကောင်ဟာ
လူအယောက်ပေါင်း ၁ သောင်းခွဲကို သေစေနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တို့က တွက်ချက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဖြေဆေးလည်းတော်ရုံရှာလို့မရပဲ အဆိပ်မိရင် အားလုံးသေကြရပါတယ်။ယင်းရွှေဖားကိုယ်တိုင်ကသာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်မျိုးတည်းသော ကိုယ့်အဆိပ်ကို ခံနိုင်တဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဆိပ်က မည်သည့်သတ္တဝါကိုမဆို သတ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းဖားကို စားမိတဲ့ မည်သည့် သတ္တဝါမဆိုလည်း သေကြရပါတယ်။ Liophis Epinephelus အမည်ရှိတဲ့ မြွေမျိုးက
လွဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောင် အပြည့်အဝမဟုတ်ပဲ liophis မြွေမျိုးလည်းအခန့်မသင့်ရင်
သေရပါတယ်။ပိုပြီးတော့ ကြောက်စရာကောင်းတာက ယင်းရွှေအဆိပ်ဖားတွေဟာ အစုလိုက်နေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၄ ကောင်လောက်စုနေကြပါတယ်။ပြီးတော့ သက်ရှိဖားတွေထဲမှာ ယင်း Golden Poison Frog က ဥာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဖားဘုရင်လို့တောင်တင်စားထားကြပါတယ်။ဘယ်သက်ရှိသတ္တဝါကမှလည်း အန္တရာယ်မပေးရဲတဲ့အတွက် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ဘုရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၅၅ မီလီမီတာလောက်အထိကြီးထွားနိုင်ပြီး
ရွှေရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်အဆင်းရှိတတ်ကြပါတယ်။သူတို့နေထိုင်ကျက်စားတဲ့နေရာဒေသကတော့အပူချိန် 26 ဒီဂရီ စဲစီးယက် ထက်မနည်းတဲ့ မိုးသစ်တောဒေသကဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း
အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်တောင် အဆိပ်တစ်ခါထုတ်ရင် သက်ရှိသတ္တဝါတစ်ဦး တစ်ကောင်ကိုသာသေစေပြီး ရွှေအဆိပ်ဖားကတော့ ထောင်သောင်းမကကို သေစေပါတယ်။ အဆိပ်ထုတ်စရာမလိုပဲ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်တွေနဲ့ သင်းကြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအဆိပ်ဖား သွားတဲ့နေရာကို တစ်ရှုးနဲ့သုတ်ပြီး ခွေးတို့ ကြက်တို့ကို ပေးရှူလိုက်ရင်ချက်ချင်း မာလကီးယား
ဒါကြောင့် ရွှေအဆိပ်ဖား Golden Poison Frog ကို ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သက်ရှိသတ္တဝါအဖြစ် အများစုလက်ခံထားကြပါတယ်။
Posted by 925 at 11:160comments
မျက်စိမမြင်ပေမဲ့ ကားပြင်နိုင်တဲ့ မက်ကန်းနစ်
မျက်မမြင်ကားပြင်သူတစ်ယောက်ဟာ သူဟာ ကားရဲ့
အသံကိုနားထောင်ရုံ ကားရဲ့ တုန်ခါမှုကို ထိတွေ့ရုံနဲ့ ကားဘာဖြစ်လဲဆိုတာ သိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ နာမည်က Col Collewijn ဖြစ်ပြီး ဟော်လန်နိုင်ငံ Nuis က ဝပ်ရှော့တစ်ခုမှာ
အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူဟာသူ့အသက် ၈ နှစ်သားအရွယ်မှာ အမြင်အာရုံ ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Collewijn က ကျွန်တော့် ကရိယာ တွေဟာ ကာလကြာရှည်စွာ နေရာတစ်ခုတည်းမှာပုံသေရှိနေခဲ့တာပါ။
မူလီ တစ်လုံကအစ မြေကြီးပေါ် ကို ကျနေခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီကိရိယာတွေကို လှမ်းပြီး ကောင်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အမြဲတမ်း ကျွန်တော် အကြားအရုံနဲ့ အထိအတွေ အာရုံ တွေကို ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
ပြီးတော့ ကားတစ်စီးရဲ့ အင်ဂျင် တုန်ခါမှုနဲ့ အင်ဂျင်ထဲက ပုံမှန်မဟုတ်ထူးခြားပြီး ထွက်လာတဲ့အသံမျိုး ကို ကျွန်တော်သိတယ်။ တခါတစ်လေဆို အသံကြားတာနဲ့ အဲ့ဒီကား ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ တိတိကျကျ ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်။ တခြားကားပြင်တဲ့ ဝပ်ရှော့ ဆရာတွေအားလုံးထက် ကျွန်တော့မှာ တပန်းသာတဲ့ အားသာချက် တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော် အမှောင်ထဲမှာ ကားပြင်နိုင်တယ် လို့ Collewijn က ရယ်မောပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by 925 at 07:270comments
ဝက်မွေးမြူတဲ့ လယ်သမားအဖိုးအို ဝက်စားသောက်တာကို ခံလိုက်ရခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ အော်ရီဂွန်မှာ အသက် ၇၀ အရွယ်ရှိတဲ့ လယ်သမားအဖိုးကြီးကို သူမွေးထားတဲ့ ပေါင်ချိန် ၇၀၀ (318 Kilos) လောက်ရှိတဲ့ ဝက်တွေကဝိုင်းဝန်းစားသောက်
ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာဒေသ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ လယ်သမားအဖိုးအိုဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Terry V. Garner ဆိုတဲ့ လယ်သမားအဖိုးအိုဟာ ဝက်တွေကို အစာကျွေးဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပြန်မရောက်လာတော့လို့ သူ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်က သူ့ကို ဝက်မွေးမြူတဲ့ခြံကို လိုက်သွားကြည့်တဲ့အခါ သူ့သွားတွေလို့ ထင်ရတဲ့အရာတစ်ချို့နဲ့ အသားစ တစ်ချို့ ကိုပဲတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ NBC သတင်းဌါနက ဆိုပါတယ်။
သတင်းတွေရဲ့အဆိုအရ ဝက်တွေဟာ လယ်သမားအဖိုးအိုရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကိုချန်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေသပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ Garner ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းလေ့လာမှုတွေကို လုပ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီရုံးရဲ့ကြေငြာချက်မှာတော့အနည်းဆုံးဝက်တစ်ကောင်က Mr. Gamerကိုရန်လိုခဲ့ပုံရတယ်လို့
ဒီလို ဝက်တွေက လူကိုစားသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရိုမေးနီးယားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာလည်း သူမွေးထားတဲ့ ဝက်တွေက သူ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ စားသောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာက ဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
သေမှုသေခင်းဆရာဝန်တွေကတော့ Mr. Garner သေဆုံးသွားရခြင်းအကြောင်းကို ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အရိုး၊အသားစတွေကနေပြီးတော့ စစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို ကြည့်ရှုပြီး ဝက်မွေးမြူတဲ့ လူတွေ ဝက်စာကျွေးရင် ဂရုတစိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
Posted by 925 at 08:540comments
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသော လောဘသားများ၏ စက်စုပ်ရွံရှာဖွယ်လုပ်ရပ်များ
ပြင်သစ်နိုင်ငံထိန်းချူပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီး အာဖရိကအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော reunion ဆိုသောကျွန်းကလေးတွင် လောဘသားတစ်ချို့ ငါးမန်းကိုမျှားဖို့ ခွေးကလေးတွေကို ငါးမျှားချိတ်မှာချိတ်ပြီးမျှားတာကို alldogsnews ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ခွေးကလေးတွေရဲ့ နှာခေါင်း ပါးစပ်နဲ့ ခြေထောက်တွေကို ချိတ်ပြီး မျှားမှတော့ ခွေးကလေးတွေ ဘယ်လောက်နာကျင်မလဲဆိုတာ.....
တိရစ္ဆာန် ချစ်သူများ အဖွဲ့အစည်းက ပြစ်ဒဏ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အစား ၁၀၀၀၀၀ အထိ ဒဏ်ရိုက်ဖို့နဲ့ ထောင်ဒဏ်ကိုလည်း ၂ နှစ်အစား ၁၀ နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ အခုဆို လူပေါင်း ၈၀၀၀၀၀ ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by 925 at 10:56 1 comments
Posted by 925 at 03:28 1 comments
မျက်လုံးအရောင် နှစ်မျိုးရှိသော သတ္တဝါများ
လူတို့သည် မျက်လုံးလှပဖို့ရန်အတွက် အရောင်အသွေးအမျိုးစုံလင်သော မျက်ကပ်မှန်များကို တပ်ပြီး တန်ဆာဆင်ကြပါသည်။ သို့သော် တိရစ္ဆာန်တို့မူကား မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်။ ဒါပေသိ သြော်ဒေဂျင်နယ် မျက်လုံးအရောင် နှစ်မျိုးရှိသော သတ္တဝါများ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဗဟုသုတအနေဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
Posted by 925 at 03:000comments
ဗြိတိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပြိုင်ပွဲ မှကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး မုန်လာပင် စံချိန်တင်ပေါ်ထွက်လာ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အသီးအနှံ ပြိုင်ပွဲမှာ Peter Glazebrook ဆိုသူ စိုက်ပျိုးရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အရွက်စားနိုင်တဲ့ မုန်လာပင်တစ်မျိုးဟာ ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး မုန်လာပင် အဖြစ် မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအပင်ရဲ့ အရှည်ဟာ ၁၈ ပေ ၅ လက်မ (သို့) ၅.၆၀၇ မီတာ ရှိကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
Mr Glazebrook ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဝင်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမ အဖြစ်နဲ့ရော ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်ရော ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တာကြောင့် အလွန်ပဲ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမိကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အတူ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် အကြီးဆုံး ဥ အဖြစ် ၈ ပေါင် ၄၀ အောင်စ (၃.၇၆ ကီလို) လေးတဲ့ အာလူး တစ်ဥ လဲ ဆုရသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 00:180comments
iPhoneနှင့် iPad များဖြင့် ထိန်းချုပ် နိုင်မည့် iB...
ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေပေ...
ဝက်မွေးမြူတဲ့ လယ်သမားအဖိုးအို ဝက်စားသောက်တာကို ခံလ...
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသော လောဘသားများ၏ စက်စုပ်ရွံရှ...
ဗြိတိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပြိ...